Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.1 Hordhac
In da'da analog ah, ururinta xogta ku saabsan hab dhaqanka-kii sameeya waxa marka-ahaa mid qaali ah, oo sidaas daraaddeed, dhif. Hadda, in da'da digital, dabeecadaha balaayiin qof ayaa la diiwaangeliyey, kaydiyaa, iyo analyzable. Tusaale ahaan, mar kasta oo aad riix on website a, ka dhigi call a on telefoonka gacanta aad, ama bixiso wax credit card aad, rikoor digital ee dhaqanka loo abuuray iyo kaydiyaa by ganacsi. Sababtoo ah xogta kuwanu waa a by-saarka ee falalka maalin kasta dadka, ay inta badan loo yaqaan digital raad. Waxa intaa dheer in kuwan raad ay hayaan ganacsiga, dawladaha sidoo kale xogta cajiib ah oo hodan ah oo ku saabsan dadka iyo ganacsiga labadaba, data taas oo inta badan waa digital ah iyo analyzable. Si wadajir ah, kuwaas oo diiwaanka ganacsiga iyo xukuumadda waxaa inta badan loo yaqaan xogta weyn.
Webiga abid ka soo baxa xogta weyn tahay in aan wax ka soo dhaqaaqay adduun halkaas oo xogta dabeecadda ku yaryihiin dunida ah, halkaas oo xogta habdhaqanka laga gooynayaa. Laakiin, sababta oo ah, kuwaas oo xogta nooc waa cusub, lacagta nasiib cilmi iyaga oo isticmaalaya eg saynisyahano ku dhexwareeri dabagalka macluumaadka la heli karo. Cutubkan, halkii, waxay bixisaa hab mabda'a ah in la fahmo ilaha kala duwan ee xogta iyo sida ay loo isticmaali karo. fahamka Tani doonee, waa in lagaaga caawiyo in aad si fiican u dhigma su'aalo cilmi aad u ilo ku habboon xogta. Ama, haddii ilaha jira ee sida waxaa ka maqan, ka dhaadhiciyo in aad si ay u ururiyaan xogta adiga kuu gaar ah la isticmaalayo fikrado ah cutubyada mustaqbalka.
Talaabada ugu horeysa si ay u barashada ka data weyn waa in ay ogaadaan in ay qayb ka mid ah category ballaaran xogta in badan ayaa la isticmaalay cilmi bulshada sanado badan waa: xogta dheehidda. Ku dhowaad, xogta dheehidda waa xog kasta oo keenta ka logu nidaam bulsho oo aan la guda galin hab qaar ka mid ah. Hab cayriin in aad ka fikirto waxa ku saabsan waa in xogta dheehidda waa wax walba oo aan ku lug leh dadka (tusaale ahaan, sahan, mawduuca of Cutubka 3aad) ama beddelo deegaan dadka (tusaale ahaan, tijaabo, mawduuca of Cutubka 4) hadalka. Sidaas darteed, marka lagu daro diiwaanka ganacsiga iyo xukuumadda, xogta dheehidda kaloo ka mid ah waxyaabaha sida qoraalka of articles wargeyska iyo sawiro satellite.
Cutubkani waxa uu leeyahay saddex qaybood. First, Qaybta 2.2, waxaan ku tilmaami xogta weyn in faahfaahin dheeraad ah iyo caddayn farqi asaasiga ah iyo xogta ah in ay guud ahaan la isticmaalo cilmi bulsho ee la soo dhaafay u dhexeeya. Markaas, Qaybta 2.3, waxaan ku tilmaami toban sifooyinka badan ee ilaha xogta weyn. Fahamka astaamahaan awood noo soo dhaqso aqoonsado liito iyo ilaha jira oo naga caawin doonaan fuula ilaha cusub oo la abuuri doono mustaqbalka. Ugu dambeyntii, Qaybta 2.4, waxaan ku tilmaami saddex xeelado cilmi ugu muhiimsan in aad isticmaali karto si ka data dheehidda bartaan: wax tirinta, wax saadaalinta, iyo Qiyaasidda tijaabo ah.